kubudikidza Linda Anderson
Last updated: Jun. 01 2020 | 4 Maminitsi verenga
Ko katsi here isu kuda, kana tiri isu inongova anokonzera zvokudya zvavo zvitengeswa?
A Human anogona Opener
Dear Inogona Opener,
Havagoni here kuudza tinokudai panzira tinotevera iwe kumativi, kusvetuka zviende bhokisi paunenge mudukusa aizvitarisira, uye purr kunyange kana itís kwete dinnertime? Ehe saizvozvo, tinokudai zvakatowanda pashure youíve akatipa yedu kufarira katsi chikafu!
Mommas ari pfumbu tabby rine ingwe striping. Patakaona naye, aiva nepamuviri uye akanga ashungurudzwa ó vaifanira kuzvitarisira pachake uye vane kittens varo mumugwagwa. Ndakanga mugore rangu pakoreji apo vabereki vangu vakatora muna Mommas uye Persephone, kwevaya catís mumwe mwana asara. Takafara chaizvo pamberi pavo. Thorndike, katsi kwedu makore gumi namashanu, akanga achangobva kufa. kurwadziwa kwedu pamusoro kurasikirwa kwake kwakanga kukuru, uye isu didnít tinoda kuramba kugara catless musha. Taida zvandinoshevedzera Negima rudo,
kunyanya nokuti ndaiva mwana chete pamba pashure nasisi vangu vaviri vakanga akatama. To Makorokoto kwedu zvakanaka, Mommas nomwanasikana uye akaratidza kuva nyanzvi mune katsi wepfungwa; vaiziva sei kutarisira peopleís mumanzwiro.
Mommas vaiwana rake zita nokugamuchira vabereki vangu uye ini sokunge taiva hukwana dzayo. Nguva pfupi pashure kuuya kumba nesu, Mommas vakatanga isu vachitevera ringa kuona taiva kuti. Pose upi noupi wedu akachema, Mommas akagara patsoka dzedu uye akamirira nomwoyo murefu kusvikira aigona yokundiisira rudo yake uye nyaradzo.
Pashure pemakore mhenyu iyoyo guta, vabereki vangu vakatamira Pennsylvania pamwe Mommas uye Persephone, apo hanzvadzi dzangu uye ini akasara Massachusetts. baba vangu kwaireva zvose kwandiri, uye wokupedzisira chinhu ndingadai nokusingaperi aida chaiva afe oga. mumwe asi usiku, vakaipisisa kutya vangu sokunge azadzika. Hanzvadzi dzangu yakasvika pamusuo yangu vamwe zvikuru nhau: Amai vedu vadana kuvaudza kuti sheíd kumba kuwana baba vangu avete yokutandarira ?nzeve; akanga zvapfuura apo terevhizheni. Kuzorora kwangu, Zvisinei, Hanzvadzi dzangu akati kuti baba vangu vakanga handihwo bedzi okupedzisira nguva hwake. shamwari A inodikanwa kwazvo vaimbova naye: Mommas.
Mommas akanga fatherís vangu kugara shamwari kana amai vangu vakaenda nokuda basa rake. Usiku kuti iye akamuwana ive hope husingaperi, naiyewo akawana Mommas agere parutivi rwake. Kunyange sezvo amai vangu akachema pamusoro pake, katsi iri haana kusiya baba vangu. Apo amburenzi akauya, Mommas aifamba neshure uye akachera varo mahwanda kupinda kapeti chero kuedza kuita paakatama.
pakupedzisira, mai vangu coaxed naye muimba yokurara kuitira kuti vashandi aigona kutora muviri fatherís dzangu kure.
Pashure fatherís rufu, Mommas nomuitiro mai vangu masikati nousiku, kuburikidza dzose dzakaoma. Iye akaita sokuti zvishoma ndakasurukirwa imba. Naye kunyatsoteerera, Mommas zvakabatsira kuderedza ndangariro dzinorwadza. Pose mai vangu kana ndaichema, Mommas nokushivirira akagara pedyo nesu, akasimudza rimwe paw kubata ruoko rwedu kana ruoko, uye ukananzva misodzi pazviso zvedu ngatiregei kuziva akanga pedyo.
Iye akagara zii isu kuitira kuti vavhiringe; airatidzika kuziva kuti taifanira yokuchema. Shure takarega kuchema, Mommas vaitanga loudest, vakawanda Kudziya purr. Ipapo sheíd dzinokwira pana mumwe pamakumbo edu. Ini donít kuziva sei amai vangu uye ndingadai ndazviwanira kuburikidza nguva idzodzo pasina Mommas.
Kwerinenge gore pashure yangu fatherís rufu, Mommas akarwara pamwe hyperthyroidism. Pasina zvinodhura kenza pakurapa uye mushonga, iye angadai akafa. Hatina kuzeza amuriritire. Isu couldnít kurasikirwa naye ikozvino.
Shure kwezvose, iye aiva nhengo yemhuri yedu. Sezvo akatanga kuzoteura paundi pashure paundi, takashanda nokusingaperi pamwe Mommas nechokwadi akadya yokuwedzera chikafu kuchengeta kwake uremu kumusoro. pakupedzisira, iye vateveri vedzidziso kubva romuzvarirwo gumi-paundi mufananidzo duku makirogiramu manomwe. Kana takasarudza mutorei imwe Vet kuti nemwaranzi kurapwa, tsvimbo akatiudza theyíd ndamboona katsi akafanana Mommas; akanga ari utano nani pane vamwe varwere pa uremu ichi. Pazuva kwake kurapwa, Mommas akanamatira yose Vet wevanamakanika, purring uye uchivaudza kuvambundira naye.
Ndinoonga kuti Mommas akadzokera utano hwakanaka. Zvinosuruvarisa, isu akarasikirwa Persephone kuti chirwere cheshuga uye kukwegura gore rino. Hazvina kufanira kutarisa Mommas abate akanyatsodengezerwa sezvo vakawanda achapfuura asati kwake. Iye zvino musoro wemba kuti zvinosanganisira imbwa makuru maviri takazvitora kubva mumigwagwa. Tinewo ikozvino tine Dutchess, katsi mutsva wechiduku akashungurudzwa uye ndaraswa. Dutchess akatarisa Mommasís ose Kutama, kudzidza sei kuita, apo kuenda, uye chii kudya.
Mommas yava nemakore zvizhinji. Iye wakawondereiko kudai mazuva ose zvikuru zvino, uye bvudzi chakarasikirwa dzakawanda rayo kubwinya. Iye nyarara uye vanogutsikana kuzogara zuva apo kushambidzika wake mbava. Kunyange zvazvo ndinoziva nguva yangu naye ari shoma, Ndinoedza kwete kufunga nezvazvo. pachinzvimbo, Ini kufunga kwangu chii Mommas vakadzidzisa. Ndakadzidza zvakawanda kubva katsi iri pamusoro Unconditional, rukudzo, uye mhuri basa pane munhu zvake. Vayo rudo kuti hapana mashoko anogona zvakakwana anorondedzera.
Above zvimwe zvose, Mommas riri chikonzero ndava wemhuka technologist. Iye akafuridzira ini aine chido kuti ini zvinokoshesa uye aidaro. Ndiri kudzidzira kutarisira vaya havatauri kutambura kwavo, uyo chinyararire vanowanzoona kwatiri uye kukumbira chete kwedu rudo kudzokera.
Kuvimbika shamwari yechokwadi inogona kuva mumwe mukuru hwomutambarakede muupenyu.
Pane vamwe, mhuka kana munhu, vari vachikuvadza uye vanoda iwe parutivi kwavo?